Arsenal Oo Jabinaysa Liverpool, Leicester Oo Garaacaysa Man City, Everton Oo Libin Weyn Helaysa Iyo Saadaasha Dimitar Berbatov Ee Premier League - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaArsenal Oo Jabinaysa Liverpool, Leicester Oo Garaacaysa Man City, Everton Oo Libin Weyn Helaysa Iyo Saadaasha Dimitar Berbatov Ee Premier League
Arsenal Oo Jabinaysa Liverpool, Leicester Oo Garaacaysa Man City, Everton Oo Libin Weyn Helaysa Iyo Saadaasha Dimitar Berbatov Ee Premier League
Dimitar Berbatov ayaa soo saaray saadaashiisa kulamada horyaalka Premier League ee toddobaadkan, waxaana uu tilmaamay in natiijooyin qalbi jab ku ah kooxo waaweyn ay soo bixi doonaan.
Manchester City oo u tegaysa Leicester City galabta maanta ayuu Dimitar Berbatov sheegay in ay lasoo kulmi doonto guul-darro, taas oo haddii ay dhacdo noqon doonta markii labaad oo Leicester ay horyaalka Premier League ku garaacdo xilli ciyaareedkan socda.
Qalbi-jabka ugu weyn waxa uu u sheegay Arsenal iyo Liverpool oo natiijooyin aanu midkoodna ku qanci doonin ka heli doona ciyaartooda maanta oo Sabti ah ay ku yeelanayaan garoonka Emirates Stadium, halkaas oo sida uu Berbatov saadaaliyey ay barbarro aan midkoodna dani ugu jirin ay ku geli doonaan.
Labada kooxood ayaa mid walba shabaqeeda la taaban doonaa, laakiin ugu dambaynta waxay heli doonaan min hal dhibic.
Manchester United ayaa sii xajisan doonta booskeeda kaalinta labaad iyadoo meel iskaga tiirin doonta Brighton oo Old Trafford ugu imanaysa, taas oo ka dhigan in guusha Leicester ay ka gaadhayso Man City aanay waxba ka beddelayn kala-horreynta horyaalka Premier League kaalmihiisa sare.
Thomas Tuchel ayaa rikoodhkiisa guul-darro la’aanta Chelsea uu meel sare gaadhi doonaa maanta iyagoo ka adkaan doona West Brom, sida saadaasha Dimitar Berbatov muujinayso.
Halkan kaga bogo saadaasha Dimitar Berbatov ee kulamada horyaalka Premier League ee toddobaadkan: